Kulamadii Caynabo oo ku dhamaaday in la shirqoolo Buuhoodle |
Kulamadii Caynabo oo ku dhamaaday in la shirqoolo Buuhoodle
Heshiiska bishan October 20, 2017 ka dhacay Caynaba ee dhexmaray khaatumo iyo Soomaaliland waxaa kucad in maamulkii khaatumo ee Cali Khaliif gadhwadeenka ka ahaa sirasmiya ugu biiray soomaaliland kana tanaasulay hadafkii buddhiga u ahaa ee soomaaliweyn. Hadaba maxaa ku qarsoon heshiiskaa oo laga qariyay shacab ku dhaqan waqooyi guud ahaan?
Qodobada ku xusan heshiiska wax weyn kama duwana kuwii lagu kala saxeexday Addis Ababa daba-yaaqadii sanadkii hore waxa kaliya ee ku cusubi aytahay in Cali iyo Axmed ay markan qalinka ku duugeen is afgaradka heshiiska.
Maxaa ku soo beegay wakhtigan saxeexa heshiiska? Maxay tahay danta ugu weyn ee soomaaliland heshiiskan ay ka helaysaa? Maxay khaatumo ku qanacday oo faa’iida ah mar hadii ay katanaasushay midnimo ? Su’aalahan jawaabtooda ayaa ah in si taxadar leh loo darso.
Somaliland heshiiskan wuxuu siinayaa fursad dahabiya oo ay beesha caalamka ugu muujiso in ay tahay dal kamadax banaan soomaaliya oo khilaaf kasta ama mucaaradad kasta oo ka hanaqaada dhulkeeda ay awood u leedahay in ay soo afjarto wakhtidheerba haku qaadatee.
Heshiiskan waxa ku soo beegay wakhtigan ayaa ah olalaha doorashada kadhacaysa soomaaliland si fursad labaad loo sii xisbul xaakimka kulmiye in markale talada soomaaliland hanto.
Marka aan eegno dhanka khaatumo muxuu heshiiskan uga dhigan yahay wakhtigan ayaa waxaa si mug leh looga dhadhansankaraa khudbadii Cali Khaliif madasha kajeediyay. Cali kama hadlin maamulkii uu madaxda u ahaa sida ay ugu biireen soomaaliland iyo awood qaybsi labada dhinaca aha, laakiin nuxurka khudbada Cali ayaa ahayd in gacan buuxda soomaaliland kasiiso hanashada degmada Buuhoodle oo ah degmada kaliya ee maamulka khaatumo ee aan si rasmiya gacanta soomaaliland waligeed usoo galin. Cali waxaa kale oo u sibadheedha ugu toyo’saday in dagaal lagali doono Puntland, soomaaliland looga fadhiyo in dagaalkaas ay kaalin weyn ka ciyaarto. Cali Khaliif wuxuu si dadban usheegay in heshiiskaas uu burburayo hadii soomaaliland ka warwareegto in arinta Puntland isagoo u dhigay in mabda’ii khaatumo kaga tanaasushay midnimada uu yahay meel saarida maamulka garoobe.
Hadii soomaaliland go’aanka Cali Khaliif ku raacdo maxaa kadhalan kara ama ay ku waayi kartaa soomaaliland diyaarse ma utahay in soomaaliland jabiso heshiiskii dhexyaalay Jahadihii SNM iyo SSDF horaantii 1990” maadkii?
Su’aasha waxaa ka jawaabi doona misharaxiinta u tartamaysa jagada madaxweynaha ee soomaaliland rayi ahaanteyda Cali Khaliif waxa ku gacan siinkara hadafkiisa waa labada musharax ee Muuse Biixi iyo Faysal Cali Waraabe midkii jagada ku soo baxa.
“Biyo saro tagay, aynu wadadhawrno”